Vol. 12 FEBRUWARI, 1911. 5
NGOKUFANELE imbeko, isisa, ubulungisa, ukunyaniseka, ubunyani kunye nobunye obuqhele ukwenziwa ngokungaqhelekanga nangokungakhethi buso ngabokungagungqi, ubudlelwane buyathethwa kwaye isiqinisekiso sobuhlobo siyachaphazeleka kwaye samkelwe kuyo yonke indawo; kodwa, njengazo zonke iimpawu, kwaye, nangona zivakalelwa kumanqanaba athile ngawo onke amadoda, kuyintambo kunye nesimo esinqabileyo.
Naphi na apho abantu badityaniswa khona, iziqulatho zenziwa phakathi kwabanye ababonisa ukungakhathaleli okanye ukungathandi. Kukho into ebizwa ngokuba ngabadlali besikolo ukuba bubuhlobo babo. Batshintshana ngezinto eziyimfihlo kwaye babelana ngezinto ezidlulileyo kunye nemidlalo kunye namaqhinga kunye neeprank ekunikezelweni kobutsha. Kukho intombazana yeevenkile, intombazana yomculo, ikhola intombazana. Baxelelana iimfihlo zabo; Bayancedana xa bephumeza izicwangciso zabo, kwaye kulindeleke ukuba benze nayiphi na inkohliso encinci apho amacebo omnye anokuzisebenzisa, okanye ukumkhusela xa ukufunyanwa kungafunwa; ubudlelwane babo buvumela umntu ukuba azivelisele yedwa kwezinye izinto ezininzi ezincinci ezinomdla kuzo.
Amadoda eshishini athetha ngobuhlobo babo, obuqhele ukwenziwa kwishishini-elifana nelo kurhwebo. Xa ubabalwe kwaye uceliwe bayabuyiselwa. Umntu ngamnye uya kunika uncedo lwezezimali kunye nenkxaso kwaye aboleke igama lakhe kwimicimbi engenayo kunye nekhredithi, kodwa ulindele ukubuya ngohlobo. Umngcipheko ngamanye amaxesha uthathwa kubuhlobo beshishini ngomnye encedisa omnye apho iimfuno zakhe zibekwa emngciphekweni; kwaye ubudlelwane beshishini bandisiwe ukuya kwinqanaba lokuba umntu abeke enye inxenye enkulu yechuma yakhe, ukuze enye, esoyika ukuphulukana okanye ihluthwe ubutyebi bakhe, ayifumane kwakhona. Kodwa oku ayisiyomfuneko ngokungqongqo kwishishini. Ngobungqongqo obuhlobo beshishini bunokubonakaliswa kuqikelelo lwendoda yaseWall Street ethi, xa ilungele ukuququzelela kunye nokudada inkampani yeemigodi enexabiso elithandabuzekayo, kwaye inqwenela ukuyinika ukubonakala ngathi yomelele kwaye ime, ithi: “Ndiza kumcebisa uMnu. noMnu Dollarbill kunye noMnu. Churchwarden, malunga nenkampani. Ngabahlobo bam. Ndiza kubacela ukuba bathathe izabelo ezininzi kakhulu kwaye ndiya kuzenza abalawuli. Zinto zini ezilungileyo ezenzelwe abahlobo bakho ukuba awukwazi ukuzisebenzisa. ”Ubuhlobo bezopolitiko kufuneka buxhase iqela, liqhubekeke kwaye liqhubekise iinkqubo zabo, ukufaka nayiphi na ibhili, nokuba ingaba ilungile, iyanceda eluntwini. , unika ilungelo elikhethekileyo, okanye yindalo enobuqhophololo nolisikizi. "Ndingabaxhomekeka kubuhlobo bakho," inkokeli ibuza omnye wabaxhasi bayo xa inyathelo lokunyanzeliswa linyanzeliswa kwiqela lakhe kwaye limiselwe abantu. “Unayo, kwaye ndiza kukubona,” yimpendulo emqinisekisa ngobuhlobo bomnye.
Kukho ubudlelwane phakathi kwe-rakeel rakes kunye nehlabathi lehlabathi echazwe ngomnye wabo xa echaza enye, "Ewe, ukumisela imbeko kaCharlie kunye nokugcina ubuhlobo bethu, bendixoka njengendoda." Kubudlelwane phakathi kwamasela namanye ulwaphulo-mthetho, ayilindelekile kuphela ukuba omnye ancede omnye kulwaphulo-mthetho, kwaye ahlanganyele kwityala njengasekuphangweni, kodwa uya kuya nakuphi na okugqithisileyo ukumkhusela emthethweni okanye ukukhusela inkululeko yakhe xa ebanjiwe. Ubudlelwane phakathi kwabahambi ngenqanawa, amajoni kunye namapolisa kufuna ukuba izenzo zomnye, nangona zingafanelekanga kwaye zineentloni, ziya kuxhaswa kwaye zikhuselwe ngomnye ukuba zimncedise ekubambeni isikhundla sakhe okanye ukuqeshwa kwisikhundla esiphezulu. Ngalo lonke olu buhlobo kukho umoya weklasi apho umzimba okanye iseti nganye ibanjiswa khona.
Kukho ubudlelwane babagxeki, abakhweli beentaba, abazingeli, abakhweli kunye nabahloli, okwenziwa ngokuthi baphoswe ndawonye kwindawo enye, bejamelene nobunzima obufanayo, ukwazi nokuzabalaza ngeengozi ezifanayo nokubamba iziphelo ezifanayo. Abahlobo kwezi zinto zihlala zenziwa yimvakalelo okanye imfuno yokukhusela ngokuchasene neengozi zomzimba, ngesikhokelo noncedo olunikwa kwiindawo eziyingozi, nangoncedo ngokuchasene nezilo zasendle okanye ezinye iintshaba ezisehlathini okanye intlango.
Ubudlelwane kufuneka bohlukane nobunye ubudlelwane obunjengobokuqhelana, ubudlelwane, ubuhlobo, ubuqhetseba, ubuhlobo, ubudlelwane, ukuzinikela, okanye uthando. Abo baqheleneyo, banokungabi namdla okanye uthandane; Ubuhlobo bufuna ukuba ngamnye abe nomdla kwaye ahlonele omnye. Intlalontle ifuna ubudlelwane obukhoyo ekuhlaleni kunye nokuzonwabisa okwamkela iindwendwe; kodwa abo banobuhlobo banokuthetha kakubi okanye babaphathe kakubi abo bakholekileyo kubo. Ubuhlobo abuyi kuvumela inkohliso enjalo. Ukusondelelana kusenokwenzeka ukuba bekukho iminyaka kwishishini, okanye kwezinye izangqa ezifuna ubukho bomntu, ukanti angamcekisa kwaye amdele umntu athandana naye. Ubuhlobo abuvumeli ukuba kungabikho mvakalelo. Ukuqhelana nosapho kuvela ngokuqhelana ngokusondeleyo okanye ubudlelwane phakathi kwezentlalo, ezinokuthi zingathandeki kwaye zingathandeki; Akukho mvakalelo gwenxa okanye ukungathandi inokubakho kulwalamano. Ubuhlobo sisenzo okanye ilizwe elinomdla komnye entliziyweni, esinokuthi singabongwa okanye siqondwe lelinye; ubuhlobo abuhlangani kunye; Kuyaphindeka kwaye kuqondwe ngabo bobabini. Ukuthandana kubudlelane kunye nobuhlobo, obunokupheliswa xa amaqabane athe ahlukene; ubudlelwane abuxhomekekanga kunxibelelwano lobuqu okanye ubudlelwane; Ubuhlobo bunokubakho phakathi kwabo abangazange babonana kunye nokunyamezelana, nangona kunjalo umgama omkhulu kwisithuba kunye nexesha linokungenelela. Ukuzinikela sisimo sengqondo apho umntu azibambe ngokwakhe nakubani na, ilizwe athi azibandakanye kulo ngenkuthalo, ekusebenzeni isizathu, ukuzabalazela ukufezekiswa kweenjongo ezithile okanye ezilungileyo, okanye kunqulo loThixo. Ubuhlobo bukhona phakathi kwengqondo kunye nengqondo, kodwa hayi phakathi kwengqondo kunye neyona nto ifanelekileyo, okanye umgaqo ongabalulekanga; nokuba ubudlelwane abukho kunqulo olunikwa ingqondo. Ubuhlobo buxhasa umda ofanayo okanye othathelanayo wengcinga kunye nokwenza phakathi kwengqondo nengqondo. Uthando luhlala lujongwa njengolangazelelo olunqwenelekayo kunye nokulangazelela, ukuthulula okunomtsalane kwemvakalelo kunye nothando ngento ethile, umntu, indawo okanye ukuba yeyiphi; kwaye uthando luqwalaselwa ngokukhethekileyo kwaye lusetyenziselwa ukumisela imvakalelo okanye iimvakalelo, okanye ubudlelwane bothando obukhoyo phakathi kwamalungu osapho, phakathi kwabathandi, okanye phakathi kwendoda nomfazi. Ubudlelwane bunokubakho phakathi kwamalungu osapho naphakathi kwendoda nomfazi; kodwa ubudlelwane phakathi kwabathandi, okanye indoda nomfazi abuhlobo. Ubuhlobo abufuni lwaneliseko lweemvakalelo okanye naluphi na ulwalamano lomzimba. Ubudlelwane bobuhlobo yengqondo, yengqondo, kwaye ayisiyomvakalelo. Uthando lomntu ngomntu kuThixo, okanye kuThixo womntu, sisimo sengqondo sokuba phantsi kunesikhundla esiphakamileyo, okanye esokomntu onamandla kulo mntu unokwazi ukugweba. Ubuhlobo busondela ngokulinganayo. Ubuhlobo bunokuthiwa luthando, ukuba uthando alunanyama; imvakalelo okanye ulwazi lolwalamano, olungakhange luqhotyoshelwe ziincamathiselo zeemvakalelo; Isimo apho imvo yokuba mkhulu kwaye iphantsi inyamalala.
Kukho ezinye iindlela elisetyenziswe ngalo eli gama, ezinje ngobuhlobo phakathi kwendoda nenja, ihashe, kunye nesinye isilwanyana. Umdaniso phakathi kwesilwanyana kunye nomntu, ogwenxa ngempazamo kubuhlobo, ukufana kwendalo kwiminqweno, okanye impendulo yomnqweno wesilwanyana kwisenzo sengqondo somntu kuyo. Isilwanyana siyaphendula kwisenzo sendoda kwaye siyayixabisa kwaye siyaphendula kwingcamango yaso. Kodwa inokuphendula kuphela ngenkonzo, kunye nokulungela ukwenza oko umnqweno wayo unakho ukukwenza. Isilwanyana sinokukhonza umntu kwaye sife ngokukhawuleza kwinkonzo yaso. Kodwa nangoku akukho buhlobo phakathi kwesilwanyana nomntu, kuba ubuhlobo bufuna ukuqonda kunye nokuphendula kwengqondo kunye nokucinga, kwaye akukho kuphendulwa okunjalo okanye unxibelelwano lweengcinga ukusuka kwisilwanyana ukuya kumntu. Isilwanyana sinokubonakalisa ingcinga yomntu kuye. Ayikwazi ukuqonda ingcinga ngaphandle kokuba inxulumene nomnqweno wayo; ayinakuqala ngcinga, okanye idlulisele emntwini nantoni na yesimo sengqondo. Ukuphindaphindiweyo phakathi kwengqondo nengqondo ngokucinga, okubalulekileyo kubophelelo lobuhlobo, akunakwenzeka phakathi kwendoda, ingqondo, kunye nesilwanyana, umnqweno.
Uvavanyo lobuhlobo bokwenyani okanye bobuxoki kukungazingci okanye umdla wokuzingca onawo komnye. Ubuhlobo bokwenyani abuyondawo yokubonakalisa umdla. Kunokubakho ubudlelwane phakathi kwabo banoluntu olunomdla, kodwa ubuhlobo bokwenene abunangcinga yokufumana into yale nto inikiweyo, okanye nokuba kungayiphi na indlela ihlawulwe ngento eyenziweyo. Ubuhlobo bokwenyani kukucinga komnye umntu kunye nokuthatha into yomnye okanye intlalo-ntle yakhe, ngaphandle kokuvumela nayiphi na ingcinga yomntu siqu ukuba iphazamisane nento ekucingayo neyenzelwe omnye. Ubuhlobo bokwenyani kukwisizathu sokungazingci esibangela ukucinga kunye nokwenza izinto ezilungileyo zomnye, ngaphandle kokuzithanda.
Ukwenza okanye ukwenza izinto ngenjongo yomnye, xa unobangela wesenzo sakhe kukuba wanelise kunye nokuba nomdla wokuzingca, ayisihlobo. Oku kuhlala kuboniswa apho kukho indawo yoluntu olunomdla kunye nalapho abo babandakanyekayo bethetha ngobuhlobo babo omnye komnye. Ubuhlobo buhlala de umntu acinge ukuba akasifumani isabelo sakhe, okanye ade omnye avume ukuvumelana naye. Emva koko ubudlelwane bobuhlobo baphela kwaye oko kwakubizwa ngokuba bubuhlobo yayiyinto yokufuna inzala. Xa umntu enolwalamano olubizwa ngokuba ngumhlobo nomnye okanye abanye kuba ngenxa yolo hlobo lobuhlobo unokufumana izibonelelo, okanye anelise inkanuko yakhe, okanye afumane amabhongo akhe, akukho buhlobo. Ubungqina bokuba ubungqina bokuba bubuhlobo abuhlobo, bubonakala xa omnye enqwenela omnye ukuba enze okungalunganga. Ubuhlobo bunokubakho apho omnye okanye bobabini okanye bonke banokufumana izibonelelo ngobuhlobo; kodwa ukuba inzala iyinqobo ebabambayo bobabini, ubuhlobo babo buyabonakala. Kubudlelwane bokwenyani umntu ngamnye uya kuba nomdla omnye komnye ungabi naphantsi kwesakhe, kuba ingcinga yakhe enye inkulu kwaye ibaluleke ngaphezu kokufuna kunye namabhongo, kunye nezenzo zakhe kunye nokujongana kubonisa imeko yeengcinga zakhe.
Ubuhlobo bokwenyani abuyi kuvuma ukuba ubomi bomhlobo obekwe esichengeni sokusindisa obakhe. Umntu olindele okanye onqwenela ukuba umhlobo wakhe abeke ubomi bakhe esichengeni, ukuba axoke, aphulukane nembeko yakhe, ukuze asindiswe kuyo nayiphi na yezi ngozi, akangomhlobo, kwaye nobuhlobo abukho kwicala lakhe. Ukuzinikela okukhulu kunokuba kwaye kubonakaliswe kubuhlobo xa ukuzinikela kufuneka, njengokukhathalela kunye nokunyamezela ngomonde kubuthathaka bokomzimba kunye nengqondo yomnye kunye nokusebenza naye ngomonde ukukhulula ukubandezeleka kwakhe kunye nokumnceda ekomelezeni ingqondo yakhe. Kodwa ubudlelwane bokwenyani abufuni, buyakuthintela, ukwenziwa komzimba okanye ngokuziphatha okanye ngengqondo ephosakeleyo, kwaye ukuzinikela kunokusetyenziswa kuphela kwinqanaba lokuba ukuzinikela kubuhlobo akufuneki ukuba kwenziwe ububi kuye nabani na. Ubuhlobo bokwenyani buphakeme kakhulu umgangatho wokuziphatha kunye nokunyaniseka kunye nokugqwesa kwengqondo ukuvumela ukuzinikela okanye utyekelo lokuya kwinqanaba lokuba kwinkonzo yomhlobo ukuba kungalimaza abanye.
Omnye unokuvuma ukuzincama kwaye angade ancame ubomi bakhe ngenxa yobuhlobo, ukuba loo mnikelo wenzelwe injongo entle, ukuba ngedini lakhe alinikeli mdla wabo banxulumene naye, nokuba bobakhe Umdla ebomini unikelwa kuphela, kwaye akasuki emsebenzini. Ubonisa olona hlobo lwenyani nolona lubalaseleyo olunokulimaza umntu kwaye olungenzi nto iphosakeleyo, nditsho nakwimeko yobuhlobo.
Ubuhlobo buza kubangela ukuba umntu afikelele ekucingweni okanye enze into kumhlobo wakhe, amkhulule kwinkxwaleko, amthuthuzele ekubandezelekeni, amnciphise umthwalo wakhe kwaye amncedise xa kufuneka, ukumomeleza kwisilingo, ukubeka ithemba kwithemba lakhe ukuphelelwa lithemba, ukumnceda asuse amathandabuzo, ukumkhuthaza xa esengxakini, ukumxelela indlela yokuphelisa uloyiko, indlela yokuzoyisa iingxaki zakhe, ukuchaza indlela yokufunda kukudumala nokuguqula ububi abe lithuba, ukumenza ukuba aqhubeke nemozulu Ubomi, ukumvuselela ekufikeleleni kwinqanaba elitsha kunye neenjongo eziphezulu, kwaye, nge, angaze abuyise okanye anciphise isenzo sakhe simahla kwingcamango okanye kwilizwi.
Indawo, imeko, iimeko, iimeko, ubume, ubushushu kunye nesikhundla, zibonakala zingunobangela okanye unobangela wobuhlobo. Zibonakala zikho. Oku kubonelela kuphela kuseto; ayizizo izinto ezibangela ubuhlobo bokwenene buhlale buhleli. Ubuhlobo obuyilwe kwaye buyanyamezelwa ngoku sisiphumo sotshintsho olude. Ayisiyonto nje eyenzekayo, nangona ubuhlobo bungaqala ngoku kwaye buqhubeke kwaye baphile ngonaphakade. Ubuhlobo buqala ngokuba nombulelo. Umbulelo ayisiyombulelo ongazenzisiyo kulowo uzuzayo uziva ezi zibonelelo zakhe. Ayisiyobulela eyenzelwe ububele besisa, nokuba ayisiyombulelo ongazenzisiyo okanye umbulelo ongazenzisiyo kulowo uphakamileyo amnike kona. Umbulelo yenye yezona zinto zibalaseleyo kwaye luphawu olufana nothixo. Umbulelo kukuvuswa kwengqondo kwinto elungileyo ethile eyithethileyo okanye eyenziweyo, kunye nokungazicingeli nokukhululeka ngaphandle kwentliziyo kulowo uwenzileyo. Amanqanaba okubonga kuwo onke amaqonga okanye izikhundla. Ikhoboka linokuthi libe nombulelo kumnini womzimba wakhe ngobubele obuthile obonakalisiweyo, njengoko i-sage inombulelo kumntwana ngokumvusela kwingqondo ecacileyo yesigaba esithile sengxaki yobomi kwaye uThixo unombulelo kwindoda ebonakalisa ubuThixo yobomi. Umbulelo lulwalamano oluhle nolwalamano. Ubuhlobo buqala xa ingqondo iphuma ngombulelo komnye ngobubele obuboniswe ngamazwi okanye ngesenzo. Olunye ububele luya kuboniswa ngembuyiselo, hayi ngendlela yokuhlawula, kodwa ngenxa yokungenisa ngaphakathi; kuba isenzo silandela ukuthambeka kwentliziyo kunye nengcinga kunye nokunye ukuziva zinombulelo ngokunyaniseka kokwazisa ngento ayenzileyo; kwaye, kunjalo, ngamnye uziva ngokunyaniseka nobubele bomnye kuye, ukuqondana kunye nokuqonda kwengqondo kuyakhula phakathi kwabo kwaye kukhula kubuhlobo.
Ubunzima buza kuvela kwaye ubudlelwane ngamanye amaxesha buzanywa kakhulu, kodwa ubuhlobo buyabambelela ukuba inzala yakho ayomelelanga. Ukuba kuvela izinto eziphazamisa okanye zibonakalise ukophula ubuhlobo, njengokuya kwindawo ekude, okanye njengokungavisisani okuvelayo, okanye ukuba unxibelelwano luyekile, ubuhlobo, nangona bubonakala buqhekekile, abupheli. Nangona abanye bengafanele babone omnye ngaphambi kokuba afe, ubuhlobo, sele buqalile, abukapheli. Xa ezo ngqondo ziphinde zenzeka kwakhona kubomi obulandelayo okanye kubomi obuzayo, baya kuhlangana kwakhona kwaye ubudlelwane babo buvuseleleke.
Xa zidityanisiwe, ukubonakaliswa kwengcinga ngazwi okanye ngesenzo kuya kuvuselela iingqondo kwaye ziya kuziva kwaye zicinga njengabathandekayo, kwaye kobomi ubudlelwane obomeleleyo bunokubakho kuluhlu lobuhlobo. Kwakhona obu buhlobo buya kuphinda buhlaziywe bube bobuqhekeka bokwahlukana, ukungavisisani okanye ukufa; kodwa ekuvuseleleni kobuhlobo omnye wabahlobo uya kuyivuma ngokulula enye kwaye nobuhlobo buza kusekwa kwakhona. Abazokwazi ngobuhlobo babo kwimizimba yabo yangaphambili kobunye ubomi, kodwa imvakalelo yokuba nobubele ayizukubakho nto ingako iyaqina. Ubuhlobo obuqinileyo obubonakala buvela nje ngamathuba okanye ngokuqhela kufutshane, kwaye obuqhubeka ngokuhlangana kobomi, ungaqali ngokwenzeka ngengozi yentlanganiso yethuba. Intlanganiso ibingeyongozi. Yayilikhonkco elibonakalayo kuludwe lweziganeko ezinde ukuya kuthi ga kubunye ubomi, kwaye intlanganiso ehlaziyiweyo kunye nokwamkelwa ngohlobo lokuziva olohlobo yayikukuthatha ubuhlobo bangaphambili. Isenzo esithile okanye intetho enye okanye zombini ziya kubangela iimvakalelo zomhlobo kwaye ziya kuqhubeka emva koko.
Ukutshatiswa kobuhlobo kuqala xa omnye enekhwele ngento yokuba abanye behlawulele omnye, okanye izimvo zomhlobo wakhe kwabanye. Ukuba ummonela umhlobo wakhe ngenxa yezinto anazo, izinto azenzileyo, iitalente okanye ubuhlakani, ukuba unqwenela ukubeka umhlobo wakhe emthunzini okanye amdlalise, iimvakalelo zekhwele kunye nomona ziya kudala okanye zisebenzise iindlela zokurhanela kunye nokuthandabuza, kunye nomdla Uya kubakhokela emsebenzini wabo wokutshabalalisa ubuhlobo. Ngomsebenzi wabo oqhubekayo baya kubizwa abaphikisi bobuhlobo. Ukungathandwa kuya kubonakala kwaye kuya kukhula kukukhula. Oku kuhlala kwandulelwa, apho umdla wokuzenzela womelele, ngokuxhatshazwa kobuhlobo.
Ukuphathwa gadalala kobuhlobo kuqala xa injongo yomnye ukusebenzisa enye ngaphandle kokumjonga ngokufanelekileyo. Oku kubonakala kwishishini, apho umntu angathanda ukuba umhlobo wakhe afune indawo yokumsebenzela kunokuba afune indawo yokusebenzela umhlobo wakhe. Kwezopolitiko kuyabonakala apho umntu azama ukusebenzisa izihlobo zakhe ngokweminqweno yakhe ngaphandle kokuzimisela ukubakhonza kwezabo. Kwindawo zembutho zokuphathwa gadalala kwabahlobo kubonakaliswa xa omnye wababiza omnye komnye, enqwenela kwaye efuna ukusebenzisa izihlobo ngenjongo yakhe. Ukusuka kwisicelo sobumnini sokuba omnye enze into ethathisayo ngenxa yobuhlobo, kwaye xa ukwenza oku kuchasene nomnqweno womnye, ukuxhatshazwa kobuhlobo kunokuphathwa kukucelwa komnye ukuba enze isenzo solwaphulo-mthetho. Xa elinye lifumanisa ukuba ubuhlobo buba ngumnqweno kuphela wokufumana iinkonzo, ubudlelwane buba buthathaka kwaye busenokufa butshabalale, okanye bunokutshintsha bube buhlobo. Ubuhlobo abufanelwe ukuba buxhatshazwe.
Eyona nto ibalulekileyo ekuqhubekeni kobuhlobo kukuba ngamnye kufuneka azimisele ukuba omnye abe nenkululeko yokuzikhethela kwingcinga nakwintshukumo yakhe. Xa isimo sinjalo sikhona kubuhlobo kuya kuhlala kunjalo. Xa inzala yokuzazisa ingeniswa kwaye iqhubeka, ubuhlobo bunokuthi butshintshe bube intiyo, antipathy, ukuthanda kunye intiyo.
Ubuhlobo luhlobo lweengqondo kwaye lusekwe kwaye lusekwe kwimvelaphi yokomoya kunye nobunye bokugcina kwindalo iphela.
Ubuhlobo kukuba ubudlelwane phakathi komqondo nengqondo, obukhula bube buzinziswa njengesizathu senjongo yomntu ekucingeni nasekuzenzeni ngenxa yolangazelelo kunye nokuhlala kolunye.
Ubuhlobo buqala xa isenzo okanye ukucinga kwaso kubangela enye ingqondo okanye ezinye iingqondo ukuba zivume ububele obuphakathi kwazo. Ubuhlobo buyakhula njengoko iingcinga zikhokelwa kwaye iintshukumo zenziwa ngaphandle kokuzithanda kwaye zilungele isigxina sabanye. Ubungane benziwe kwaye bumiselwe kwaye abunako ke ukuqhawuka xa ubudlelwane buye babonwa njengobukwisimo sakhe kunye nenjongo yaso.
Ubuhlobo yenye yezona zibalulekileyo kwaye zibalaseleyo kulo lonke ubudlelwane. Iyavuka kwaye ikhuphe kwaye iphuhlise ezona mpawu zintle kwaye zibalaseleyo engqondweni, ngesenzo somntu. Ubuhlobo bunakho kwaye bukhona phakathi kwabo banomdla wobuqu kunye neminqweno yabo ifana; kodwa akukho zinto zinomtsalane kuwe okanye ukufana komnqweno zinakuba sisiseko sobuhlobo bokwenyani.
Ubuhlobo sisiseko sobudlelwane bengqondo, kwaye ngaphandle kokuba olu khozo lweengqondo lukhona alunakubakho ulwalamano lokwenene. Ubuhlobo yenye yezona zihlala zihleli kwaye zibhetele kubudlelwane. Inxulumene nawo onke amandla engqondo; ibangela eyona nto intle emntwini ukuba ayenzele umhlobo wakhe, kwaye, ekugqibeleni, ibangela eyona ilungileyo kwinto yonke eyenzela amadoda onke. Ubuhlobo yenye yezinto ezibalulekileyo, kwaye zivuselela zonke ezinye izinto, ekwakheni abalinganiswa; ivavanya iindawo ezibuthathaka kwaye ibonise indlela yokubomeleza; Ibonisa ukusilela kwayo kunye nendlela yokubonelela, kwaye iyakhokela emsebenzini ngokuzama ngokungazingci.
Ubuhlobo buyaphaphama kwaye buvakalise uvelwano apho bekukho uvelwano oluncinci okanye kungakhange kubekho luvelwano ngaphambili, kwaye lubeka umhlobo ngakumbi kunxibelelwano nokubandezeleka komnye umntu.
Ubuhlobo buveza ukunyaniseka ngokunyanzela ubuqhophololo kunye nokugubungela ubuxoki kunye nokuzenza ngathi ukuwa, kwaye vumela ubunyani bokwenyani bubonwe bunjengoko zinjalo, kwaye uziveze ngobuchule kwimeko yabo yemveli. Inkuthazo iphuhliswa bubuhlobo, ekumeni iimvavanyo kunye nokubonisa ukuthembakala kwazo kuko konke ukuvavanywa kobuhlobo. Ubuhlobo bufundisa ubunyani kwingcinga nentetho nakwizenzo, ngokubangela ukuba ingqondo icinge ngento elungileyo okanye elungileyo kumhlobo, ngokubangela umhlobo ukuba athethe lonto ngaphandle kokuzibanga yena akholelwe ukuba ziyinyani kwaye nomdla womhlobo wakhe. Ubuhlobo buhlalisa ukuthembeka emntwini ngokwazi kwakhe nangokugcina izinto eziyimfihlo. Ukungoyiki kuyanda ngokukhula kobuhlobo, ngokungabikho kwamathandabuzo kunye nokungathembani, nangokwazi kunye notshintshiselwano ngentando elungileyo. Umgangatho wamandla uya usomelela kwaye ucoceke njengoko ubuhlobo buqhubela phambili, ngokuzivocavoca kwakhe ngokwemfuno yomnye. Ubuhlobo buhlakulela ukungaziphindezeli emntwini, ngokuthulisa umsindo kunye nokugxotha iingcinga zokwenza ububi, rancor okanye ububi kunye nokucinga ukulunga komnye. Ukungabi nabungozi kuyabizwa kwaye kumiselwe ngobuhlobo, ngokungakwazi konzakalisa umhlobo wakhe, ngobuhlobo obuvuselelwa bubuhlobo, kunye nokungavumi komhlobo ukwenza nantoni na enokwenzakalisa omnye. Ngokuphatheka kobuhlobo kuyaphefumlelwa, kumnqweno wokwabelana kunye nokunika okona kulungileyo kunabo bonke abahlobo bakhe. Ukungazingci kufundwa ngokuba nobuhlobo, ngokuzithoba nokuzonwabisa ngokuzithoba kwiminqweno yomhlobo wakhe. Ubuhlobo bubangela ukuba kuhlakuzwe umoya wobushushu, ngokuziqhelanisa nokuzibamba. Ubuhlobo buyakhupha kwaye bufezekise inkalipho, ngokwenza umntu ajongane nengozi ngesibindi, enze isibindi, kwaye akhusele ngesibindi unobangela womnye. Ubuhlobo bukhuthaza unyamezelo, ngokwenza ukuba umntu anyamezele iziphoso okanye iitshomi zomhlobo wakhe, anyamezele ukumbonisa xa ecebile, kwaye anyamezele ixesha elifanelekileyo lokoyisa nokuguqula babe ziimpawu ezintle. Ubuhlobo bunceda ekukhuleni kokulungelwa, ngokuthathela ingqalelo enye, kunye nobukhulu kunye nentembeko kunye nenqanaba eliphezulu lobomi obufunwa bubuhlobo. Ngobuhlobo sifumana amandla okuluncedo, ngokumamela ubunzima bomntu, ukuthatha inxaxheba kumdla wakhe, nangokubonisa indlela yokoyisa ubunzima bakhe. Ubuhlobo kukukhuthaza ubunyulu, ngokulangazelela iinjongo eziphezulu, ukucocwa kweengcinga zomntu, kunye nokuzinikela kwimigaqo eyinyani. Ubuhlobo bunceda ekuphuhliseni ucalucalulo, ngokwenza ukuba umntu akhangele, agxeke kwaye ahlalutye iinjongo zakhe, arraire, ahlole kwaye agwebe iingcinga zakhe, kunye nokumisela isenzo sakhe nokwenza umsebenzi wakhe kumhlobo wakhe. Ubuhlobo buyanceda ekunyaniseni, ngokufuna eyona nto iphambili ngokuziphatha, ngokuba ngumzekelo kunye nokuphila ngokuhambisana neenjongo zabo. Ubuhlobo ngomnye wabafundisi-ntsapho bengqondo, kuba bususa ukungabonakali kwaye kufuna ingqondo ibone ubudlelwane bayo obukrelekrele komnye, ukulinganisa kunye nokuqonda olo lwalamano; inika umdla kwizicwangciso zabanye kunye nakoncedo ekuphuhlisweni kwazo; ibangela ukuba ingqondo iguqulwe, ilingane kwaye ilungelelene ngokuthula ngokungazinzisi, ukukhangela ukusebenza kwayo, nokulawula ukubonakaliswa kwayo. Ubuhlobo bufuna ingqondo ilawule ukungaziphazamisi, ukoyiswa kokunganyangeki kwayo, kunye nokukhupha ucwangco ngokudideka ngokulunga ekucingeni nasebulungweni ngentsebenzo.